myanmrfont for window8 - MYSTERY ZILLION
myanmrfont for window8
Does window8 support unicode only?I want to use zawgyi font too.So how can
I install zawgyi font on window 8? Pls can u help me?How do I do?
Download and Install font from the following URL
And you can install Keyboard from the following URL.
Note: you need to install x86_64 installer
ok..thanksalot Bro..
window 8 ကို Install လုပ်နေတုန်း 56% ရောက် ရင် Error ပြပါတယ်..
Error Code: 0xC0000005 ပါ...
ဘယ်လို Install လုပ်ရမယ်ဆိုတာလေး ပြောပြပေးပါလား..
@zawsanmin ဇော်ဂျီ ထက် unicode font တစ်ခုခု ကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုပေးပါ။
0xC0000005 ပေါ်တာက လက်ရှိ သွင်းနေတဲ့ စက်က hard disk သို့မဟုတ် memory သို့မဟုတ် hardware တစ်ခုခု မကောင်းတော့လို့ ဖြစ်တာပါ။ ဒါမှမဟုတ် သွင်းတဲ့ DVD က မကောင်းတာ ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Install လုပ်လို့ရသွားပါပြီ . . . . ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်ကို. . . .
how to install pls ko zawsa zawsanmin and saturngod.
can not change zawgyi font to unicode.
@blackpig , what do you mean cannot change zawgyi font to unicode ? Can you explain more detail ?
zawgyi ပဲမြင်ရပါတယ် unicode နဲ့မမြင်ရပါဘူး ။ converter နဲ့ပြောင်းသုံးနေရပါတယ်။ အစက်လေးတွေပဲတွေ့ရပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။